Nagu saabsan - Shanghai Langyi Qalabka Waxqabadka Co., Ltd.
Shanghai langyi functional functional Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2010, iyadoo diirada la saaray bixinta xalal lagu daro waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay qalabka polymer-ka ku saleysan ester, iyo si isdaba joog ah u bixisa adeegyo kala-duwanaansho nolol-wareeg ah oo loogu talagalay macaamiisha silsiladda warshadaha polymer-ku-saleysan.
Langyi waxay qaadataa "hal-abuurnimo farsamo" aasaas u ah horumarka shirkadda, waxay dhiirrigelisaa iskudhafidda edbinta kala-duwan ee hal-abuurnimada dhammaystiran. Iyadoo ay weheliyaan jaamacado caan ah sida jaamacadda fudan iyo donghua university, in ka badan 10% dakhliga sanadlaha ah ee langyi ayaa lagu maalgeliyay cilmi baaris iyo horumarin si loo dhiso koox xoog badan oo cusub oo R&D ah, in ka badan 85% xubnood oo ka tirsan oo haysta shahaadada koowaad ee bachelor ama ka sareeya. Intaa waxaa sii dheer, in ka badan 80% xubnaha asaasiga ah ee R&D waxay leeyihiin dhakhtar ama shahaadada mastarka. Shirkaddu waxay leedahay 11 shati oo shatiyeysan oo la fasaxay, waxayna codsaneysaa in ka badan 20 shatiyeed.
Waxyaabahayagu badanaa waxay ka kooban yihiin 5 taxane ah: HyMax® CA deegaanka-saaxiibtinimo karbodiimide wakiilada iskutallaabta isku xidha, HyMax® novel anti-hydrolysis lagu daro, AntibacMaxTM waxyaabaha lagu daro ion birta bakteeriyada iyo waxyaabo ka hortaga fayraska, AntibariMaxTM walxaha ka hortaga infrared, AntistaMaxTM lagu daro waxyaabo ka hortag ah oo muddo dheer soconaya.
SI LOO SIIYO XAL HALAYNTA LOOGU TALAGALAY SHAQAALAYAASHA SHAQAALAHA EE SIYAASADDA GAAR AH EE QAABKA LOOGU TALAGALAY IYO HORUMARINTA DHIBAATOOYINKA BULSHADA IYO HORUMARKA BULSHADA AADANAHA
Maamuus iyo Shahaado
Shirkad Casri ah oo Casri ah
Mashruuca Isbadal-ku-guuleysiga Tiknoolojiyadda Sare ee Shanghai
Shanghai Top 100 mashaariicda loogu talagalay isbedelka Waxqabadka Cusub iyo Tiknoolojiyadda Sare
Shanghai waxay horumarisay shirkad gaar loo leeyahay
Koox aad u fiican Degmada Songjiang
Degmada Songjiang patent bandhig ganacsi
Abaalmarinta saddexaad ee Sayniska iyo Teknolojiyada Horumarka Degmada Songjiang, Shanghai
Shahaadada nidaamka maaraynta tayada
Wadada Ciidanka ee dib loo booqday - Hoolka Xusuusta Kacaanka ee Nanhu
Dhisida koox ee xeebta Qingdao
Ka qeybgal Carwada K ee 2019 ee Jarmalka
Ka qaybgal Carwada Rinjiga 2019
Shaybaarka aasaasiga ah
Maqaarka Antiwo Bakteeriyada Aan Laheyn, Antibacterial Electret Masterbatch, Yarn bakteeriyada, Masterbatch antibacterial, Bakteeriyada bakteeriyada dhalaalaysa-Blown Masterbatch, Wakiilka Polymeric Antihydrolysis,